DEG DEG:Xawaaladaha Soomaalida ee Sacuudiga iyo UAE oo Halis Fooda la sii Galaya | Wardaye Online
DEG DEG:Xawaaladaha Soomaalida ee Sacuudiga iyo UAE oo Halis Fooda la sii Galaya
Published on July 10, 2017 by war · No Comments
Wararka aynu ka helayno wadammada Khaliijka ayaa sheegayaa in Khilaafka Siyaasadeedka ee u dhaxeeya wadamada Khaliijka uu saameyn ku yeelan doono Ganacsiga ka dhexeeya wadammada xiriirka la leh guud ahaan dalalkaasi.
Cabsida ugu badan ayaa laga qabaa in saameyn soo wajahdo Ganacsiga Xawaaladaha Soomaalida ee ku yaal dalalka Khaliijka, gaar ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta.
Cabsidani ayaa timid wixii ka danbeeyay go’aanka diidmada ahaa ee dhowaan kasoo baxay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, taasi oo dowladdu ku diiday in ay garab istaagto isbaheysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Ganacsatada Soomaaliyeed ee xawaaladaha ku leh Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa iyagu durba la kulmaya cadaadis ka dhan ah go’aanka ay dowladda Soomaaliya ku adkeysatay. Waxaa wararku sheegayaan in Sacuudigu odorasay in Soomaaliya ay xiriir hoose la sameysatay madaxda wadanka Qadar.
Diblumaasiyiin Soomaali ah ayaa sheegay inay suuragal tahay in Khilaafka dadban ee Sacuudiga iyo Imaaraadka kala dhexeeya Somalia uu galaafto Ganacsiga ay Soomaalida ku leedahay dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Waxa ay sheegen in dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ay durba Xawaaladaha Soomaalida ay culeys ka saaren dhanka Bangiyada, iyadoo la maraayo dhammaan shuruucyada u degsan Bangiyada dalalkaasi.
Si kastaba ha ahaatee, Wasiirka maaliyada Xukuumada Somalia ayaa dhawaan arrintaani kala hadlay Danjiraha Imaaraadka u fadhiya Somalia Al-Othmani, oo aqbalay in wax laga bedelo arrintaani.